LEGO Minecraft သည်စက်ဝိုင်းအပြည့်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ပါရှိသည်
12 / 02 / 2021 12 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 804 Views စာ0မှတ်ချက် 21102 Minecraft Micro ကမ္ဘာ့ဖလား: အဆိုပါသစ်တော, 21165 ပျားလယ်ယာ, 21167 အဆိုပါကုန်သွယ်ရေး Post ကို, Ideas, Lego, Minecraft, Reddit
အဆိုပါ Lego Minecraft ဆက်နွယ်မှုသည် Digital Video Package အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူအပြည့်အဝပတ် ၀ န်းကျင်ရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။
Lego Minecraft ၂၀၁၂ ခုနှစ်များ၏မကြုံစဖူးအောင်မြင်မှုအပြီးတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ Billund မှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် Lego Ideas မော်ဒယ် 21102 Minecraft Micro ကမ္ဘာ - သစ်တော။
ဒီဆောင်ပုဒ်ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့မခက်ခဲပါဘူး Lego နှင့် Minecraft အခြေခံအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်, တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။ တစ်ခုကသင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှာသင်လိုချင်တာကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးအခြားတစ်ခုကဒီဂျစ်တယ်ဇာတ်စင်မှာအတူတူလုပ်တယ်။
Minecraftနောက်ထပ်အသစ်ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်မှာလအနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။ သို့သော် reddit အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သည်ယခုကွာဟမှုကိုပန်ကာပြုလုပ်ထားသော texture pack ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ Lego ဂိမ်းရဲ့ကို virtual အာကာသသို့အုတ်။ macio၆'s add-on ၏ရိုးရာပြားချပ်ချပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအစားထိုး Minecraft လုပ်ကွက် ခံသောစွတ်များနှင့် Lego လိုဂို - ပင်အလွှာနှင့်ဆင်တူသည် Lego အတူတူ stacked အခါအပိုင်းပိုင်း။
၎င်းသည်ယခုလက်ရှိတွင်တိုးတက်နေပြီး SEUS PTGI shader pack အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ခဏစောင့်ဆိုင်းနေရဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သင်က texture pack မှ tab များကိုသင်မှတဆင့်သိမ်းထားနိုင်သည် Minecraft subreddit.
အဆိုပါ Lego logo ကိုအများပြည်သူသို့မထုတ်ပြန်မှီထွက်ပေါ်လာရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သို့သော်အခြေခံကျသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများအနေဖြင့်၎င်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သင့်သည် Lego Group ၏တရားဝင်ဌာနartment (စarticularly) (ဖန်တီးသူကအခမဲ့) လျှင်။
ဤအတောအတွင်းတရားဝင်အမြဲရှိပါတယ် Lego Minecraft အလွန် p ခြစ်ရာမှအစုံartဒီနှစ်အပါအဝင် blocky အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်၏ icular ယားယံ 21165 ပျားလယ်ယာ နှင့် 21167 အဆိုပါကုန်သွယ်ရေး Post ကို.
← Lego Star Wars အားလပ်ရက်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူကြေငြာခဲ့သည်
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအသစ်ကိုတီထွင်ခြင်းသည် 'LEGO အစုံကဲ့သို့' →